Mareykanka oo ku baaqay in doorashada Soomaaliya laga gaaro wada xaajood siyaasadeed. – Radio Daljir
Nofeembar 24, 2020 6:20 b 0
Dowladda Mareykanka ayaa muujisay in aan laga maarmin wada hadal siyaasadeed oo lagu dhameeyo khilaafka ka dashay Guddiga Doorashada 20/21 oo ay saluugeen musharixiinta Madaxeynaha.
Kelly Craft oo ah Ergayga Washington u qaabilsan Qaramada Midoobay oo ka qaybgashay kulanka Golaha Ammaanka ee looga hadlay Arrimaha Soomaaliya, waxa ay tilmaamtay in aan laga maarmin wada-xaajood siyaasadeed si looga gudbo cabashada.
Dhameystirka Howsha Geedi socodka Soomaaliya waxa ay rajo wanaagsan gelisay marka ay wada hadlaan Dowladda Federaalka, Maamulada & dhinacyada ku lugta leh Siyaasadda oo fure u ah gelista Doorasho lagu qanacsan yahay oo waqtigeeda ku dhacda.
“Waxa aan u jeedinayaa DFS & Dowladaha xubnaha ka ah in ay sii wadaan wada-xaajoodyadda lagu saldhigayo Geedi socodka Doorashada 20/21, wax waliba waa in ay noqdaan mid wada ogol & is faham ku dhamaada, sida gudiyada maamulaya kuraasta Somaliland ee baarlamaanka” Sidaasi waxaa tiri Ergayga Washington ee QM.